Waxaan noloshayda ku kasbadaa nidaamka io
Waa maxay Systeme io?
Weli ma ogid Nidaamka Io ? Aad ayey u dheer tahay in la sameeyo hordhaca. SIO waa codsi uu sameeyay isla markaana uu soo saaray Faransiiska Aurelien Amacker, Ganacsadaha webka oo loo aqoonsan yahay guulaha ganacsigiisa. Waa aaladda halbeegga u ah Faransiiska, inay kuu oggolaato inaad abuurto oo aad si buuxda u maamusho ganacsi qadka ah. Walaalka yar ee Faransiiska ah ee ClickFunnels….
Loo aqoonsaday adeegsadayaasheeda inay a xal caalami ah iyo dareen leh sidaa darteed aad ayey u fududahay in wax laga qabto. Systeme io wuxuu isu keenayaa astaamo badan oo si joogto ah loo cusbooneysiiyo, loo wanaajiyo loona hagaajiyo.
Faa'iidadeeda ugu weyn? Qiimaheeda aadka u soo jiidashada badan!
Waa tan waxa aan ku sameyn karno SIO, iyo kuwo kale:
Abuuritaanka fudud ee tune iibka, bogagga qabashada, foomamka, ololeyaasha emaylka si dhakhso leh loogu kasbado dhagaystayaal si loogu beddelo macaamiil;
Suurtagalnimada abuuro tababarkaaga internetka si dhakhso leh oo aad ugu iibiso internetka adoo adeegsanaya lacag bixinta;
Toos u helitaankaaga tirakoob faahfaahsan inaad xisaabiso meheraddaada;
Dejinta kanaga barnaamijka raacsan.
Waxaan noloshayda ku kasbadaa nidaamka io Diisambar 12, 2020Tranquillus
READ Sidee loo bixiyaa magdhowga bukaanka?
horeMaamulaha Sare: Fahmaan istaraatiijiyadaha waaweyn ee ganacsiga
socdaBaro wareysiga ganacsiga BtoB
SYNTEC-CINOV: heshiiska qiimaha go'an ee fulinta howlaha waa inaan lagu qaldin maalin go'an!
Muxuu borotokoolka caafimaadka ka bixiyaa shirkadaha?
Calc Bilaash ah: Abuurista iyo qaabeynta miis